फरकधार / असार २८, २०७६
एजेन्सी– क्यान्सर, जसको नाम सुन्दाबित्तिकै मान्छेहरु अहिलेपनि डराउँछन् । यसको समयमै उपचार हुन सकेन भने ज्यान पनि जानसक्छ । कुनैबेला क्यान्सर लाग्यो भनेपछि मृत्यु कुर्नुको विकल्प थिएन । तर त्यो अवस्था अहिले भने छैन । यदि समयमै यसको उपचार हुन सक्यो भने क्यान्सर लागेकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छैन । जसको उपचार आजभोलि नेपालमै पनि उपलब्ध छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका वरिष्ठ डा. राजेन्द्र प्रसाद बरालकाे विचार :
के हो क्यान्सर भनेको ?
हाम्रो शरीर स–साना कोष मिलेर बनेको हुन्छ । शरीर विकासको क्रममा कोषिकाहरू अनियन्त्रित विकास हुँदा वा कोषको उत्पादन हुँदा आउने समस्या नै क्यान्सर हो । टाउकोदेखि खुट्टासम्मको जुनसुकै भागमा भित्रि तथा बाहिरी अंगमा क्यान्सर लाग्न सक्छ । विशेष गरी क्यान्सर रोग अवस्थ खानपान, अव्यवस्थित जीवनशैली र वंशाणुको कारणले वा सुर्तीजन्य वस्तुकोे प्रयोगले गर्दा हुन्छ । त्यसो त क्यान्सर भयंकर ठूलो रोग होइन । तर, समयमै यसको उपचार हुन नसक्दा भने यसले ज्यानै लिन्छ ।
कुन–कुन उमेरका मानिसलाई लाग्छ क्यान्सर ?
क्यान्सर यस्तो रोग हो, यो जोकोहीलाई पनि हुनसक्छ । र शरीरको जुनसुकै अंगमा पनि लाग्न सक्छ । यसका लागि कुनै उमेरको सीमा वा शरीरको ठाउँ निर्धारित हुँदैन ।
कुन अंगमा बढी लाग्छ यो क्यान्सर ?
त्यसो त जहाँकहीँ पनि यो रोग लाग्न सक्छ । तर मस्तिष्क, आन्द्रा र फोक्सोमा यसले बढी आक्रमण गर्छ । कुन चरणमा उपचार सम्भव हुँदैन ? सामान्यतया क्यान्सर चार चरणको हुन्छ । पहिलो, र दोस्रो चरणमा गर्यो भने यसको उपचार सम्भव हुन्छ । तेस्रो चरणमा यो एकदमै जटिल हुन्छ । तर, चौंथो चरण हो भने मानिसको मृत्यु नै हुन्छ ।
क्यान्सरका लक्षणहरू के के हुन् त ?
खान खान मन नलाग्ने : नली तथा पेट थैलीको क्यान्सर भएको छ भने बिरामीलाई खाना खान मन लाग्दैन । यसलाई हामी ग्यास्ट्रिक पनि भन्छौं । तर, यो क्यान्सरको कारणले पनि हुनसक्छ ।
रगत वा पिप आएमा : दाँतको गिंजाबाट धेरै मात्रामा रगत आउनु, पिशाब फेर्दा पिप आउनु वा महिलालाई महिनावारीको समयमा रगतसँगै पिप आएमा पाठेघरमा क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ ।
शरीरको कुनै भागमा गिर्खा आएमा : विशेष गरी स्तनमा दुख्ने अथवा नदुख्ने गिर्खा आयो भन्ने सचेत हुनुपर्दछ । यस्तो अवस्था आयो भने तुरुन्तै जँचाउन जानुपर्छ ।
घाउ तुरुन्तै निको नभएमा : शरीरमा आउने घाउ यदि चाँडै निको हुँदैनन् भने यो क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ । त्यसैले लामो समयसम्म घाउ निको नभए अस्पताल जानु पर्छ ।
शरीरमा कोठीले ठूलो आकार लिएमा: शरीरमा थुप्रै खालका कोठी देखिन्छन् । कुनै खैरा त कुनै गाढा । समय समयमा यिनीहरूको रंग पनि परिवर्तन हुने गर्छ । रंग बदलिने र कोठी ठूलो हुँदै गयोे भने छालाको क्यान्सरको लक्षणलाई जनाउँछ ।
नेपालमा यो रोगका शिकार भएका रोगीहरुको संख्या कति होला ?
ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन । तर, यति चाहिँ होकि वर्षेनी ३५ देखि ४० हजारको हाराहारीमा क्यान्सरको लक्षण देखिन्छ ।
निको हुन्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
सुरुको अवस्थामा रोग परिचाहन गरी उपचार गर्न सकियो भने सम्भव हुन्छ । तर, अन्तिम अवस्थामा यसको उपचार हुँदैन ।
नेपालमा छ त उपचार सम्भव ?
सम्भव छ । उपकरणको अभावमा कुनैकुनै क्यान्सर निको पार्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले घाउ परीक्षण गर्न देश बाहिर पनि पठाउँछौं ।
के यसलाई सरुवा रोग भन्न मिल्छ ?
होइन, यो सरुवा रोग होइन । यसरी कुनैपनि व्यक्तिमा क्यान्सर सर्दैन । तर, कुनै क्यान्सर भाइरसका कारणले गर्दा आफ्नै शरीरको विभिन्न अगंमा चाहिँ फैलिने सम्भावना रहन्छ ।
क्यान्सर लाग्दा के खाने के नखाने ?
शाहाकारी बन्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । यसबाट बच्न सागपात तथा फलफूलमा जोड दिनुपर्छ । बाहिरका अनावश्यक खानेकुरा खानु हुँदैन । यस्तै धुम्रपान र मद्यपान पनि गर्नुहुँदैन ।